ESI LELEE SSD MAKA NJEHIE - SSD - 2019
Sistemụ arụmọrụ Windows 7 na-enye ohere magburu onwe ya ịrụ ọrụ na otu ngwaọrụ maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe niile ị ga - eme bụ ịgbanwee na akaụntụ gị site na iji atumatu atumatu ma banye n'ime sava ojiji. Ọdịdị Windows ndị kachasị elu na-akwado ọnụọgụ zuru ezu nke ndị ọrụ na ụgbọ nke mere na ezinụlọ dum nwere ike iji kọmputa.
Ị nwere ike ịmepụta akaụntụ ozugbo ị wụnye sistemụ arụmọrụ ọhụrụ. Omume a dị ugbu a ma dị mfe ma ọ bụrụ na i soro ntuziaka ndị e nyere n'isiokwu a. Ọnọdụ dịgasị iche iche na-arụ ọrụ ga-ekewapụ iche iche nke usoro ihe nchọgharị na usoro nke ụfọdụ mmemme iji jiri kọmputa rụọ ọrụ.
Mepụta akaụntụ ọhụrụ na kọmputa
Mepụta akaụntụ mpaghara na Windows 7, ịnwere ike iji ngwaọrụ ndị ahụ ewuru, ọ bụghị ihe a chọrọ iji ihe omume ndị ọzọ. Nanị ihe a chọrọ bụ na onye ọrụ ga-enwe ikikere ohere ịnweta mgbanwe dị otú ahụ na usoro. Ọ naghị enwe nsogbu na nke a ma ọ bụrụ na i mepụtara akaụntụ ọhụrụ site n'enyemaka nke onye ọrụ nke pụtara n'ihu mgbe ị wụnye sistemụ arụmọrụ ọhụrụ.
Na label "Kọmputa m"nke dị na desktọọpụ, pịa aka ekpe ugboro abụọ. N'elu mpio nke meghere, chọta bọtịnụ ahụ "Mepee Control Panel", pịa ya ozugbo.
Na isi mmalite nke windo ahụ meghere, anyị na-agụnye echiche dị mma nke ngosipụta nke ihe ndị ahụ site na iji menu ọdịda. Họrọ ọnọdụ "Ihe ngosi nta". Mgbe nke ahụ gasịrị, dị n'okpuru ịchọta ihe ahụ "Akaụntụ Ndị Akaụntụ", pịa ya ozugbo.
Na windo a bụ ihe dị mkpa maka ịtọba akaụntụ dị ugbu a. Ma, ị ga-aga na njedebe nke akaụntụ ndị ọzọ, nke anyị na-agbanye bọtịnụ ahụ "Jikwaa akaụntụ ọzọ". Anyị na-akwado ọkwa dị ugbu a na sistemụ usoro.
Ugbu a ihuenyo ahụ ga-egosipụta ihe ndekọ niile dị ugbu a na kọmputa. Ozugbo n'okpuru ndepụta ịchọrọ pịa bọtịnụ ahụ. "Ịmepụta akaụntụ".
Ugbu a, e meghere nhazi mbụ nke akaụntụ okike. Mbụ ị ga-ezipụta aha. Nke a nwere ike ịbụ ma ọhụụ ya ma ọ bụ aha onye ga-eji ya. Enwere ike idozi aha a kpamkpam, jiri Latin na Cyrillic mee ihe.
Ọzọ, dee ụdị akaụntụ. Site na ndabara, a na-atụ aro ka ịmepụta ikike ndị nwere ike ịnweta, nke ga-esi na nke ọ bụla maka mgbanwe nchịkọta nke usoro nchịkwa ga-esonyere ya na arịrịọ maka nchịkwa onye nchịkwa (ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'ime usoro), ma ọ bụ ichere maka ikikere dị mkpa site n'aka ụlọ ọrụ ego na ọkwa dị elu. Ọ bụrụ na onye ọrụ na-enweghị uche ga-eji akaụntụ a, mgbe ahụ iji hụ na nchekwa nke data na usoro ahụ n'ozuzu ya, ọ ka bụ ihe na-achọsi ike ịhapụ ya na ikike ndị nkịtị ma nyefee ndị dị elu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Kwenye ihe ndenye gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, na ndepụta ndị ọrụ, nke anyị hụwororịrị na mmalite nke njem anyị, ihe ọhụrụ ga-apụta.
Mgbe onye ọrụ a enweghị data dị ka ndị dị otú ahụ. Iji mezue okike nke akaụntụ, ị ga-aga ya. Ọ ga-etolite onwe ya na folda na akụkụ nke usoro, yana ụfọdụ nke Windows na personalization. Maka nke a na-eji "Malite"mezuo iwu ahụ "Gbanwee Onye ọrụ". Na ndepụta nke gosipụtara, pịa akaekpe na ntinye ọhụrụ ma chere ruo mgbe e kere faịlụ niile dị mkpa.
Gaa na paragraf nke ise nke usoro gara aga nwere ike ịbụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị maara na iji ọchụchọ na usoro. Iji mee nke a, na nkuku aka ekpe nke ihuenyo ahụ, pịa bọtịnụ ahụ "Malite". N'okpuru windo nke meghere, chọta nchọta ọchụchọ ma tinye ahịrịokwu ahụ na ya. "Ịmepụta onye ọrụ ọhụrụ". Nchọpụta ahụ ga-egosipụta nsonaazụ dịnụ, otu n'ime nke ịchọrọ ịhọrọ na bọtịnụ òké aka ekpe.
Biko mara na ọtụtụ akụkọ na otu kọmputa nwere ike ịnwe nnukwu RAM ma buru ibu ngwa ngwa. Gbalịa ịnọgide na-arụ ọrụ naanị onye ọrụ ị na-arụ ọrụ ugbu a.
Lee kwa: Ịmepụta ndị ọrụ ọhụrụ na Windows 10
Chebe akaụntụ nchịkọta akụkọ na paswọọdụ siri ike ka ndị ọrụ nwere oke ikikere nwere ike ghara ime mgbanwe dị ukwuu na usoro. Windows na-enye gị ohere ịmepụta ọtụtụ ederede na arụmọrụ dị iche na njikwa onwe onye, ​​nke mere na onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'azụ ngwaọrụ ahụ nwere nchebe ma chekwaa.